AMISOM oo Shaacisay cida soo ridey Diyaarada African airways - Awdinle Online
AMISOM oo Shaacisay cida soo ridey Diyaarada African airways
May 09, 2020 (Awdinle Online) – howlgalka midowga afrika we Soomaaliya oo loo yaqaano AMISOM ayaa iska fogeeyey falkii foosha xumaa lagu soo riday Diyaaradii rayidka aheyd ee African Express airways.
Warqad kasoo baxdey xarunta midowga Africa ee Addis Ababa, gaar ahaan xafiiska Taliyaha Ciidanka howlgalka midowga Africa ee AMISOM ayaa lagu yiri, “Ciidamo aan ka tirsaneyn howl galka AMISOM ayaa soo riday diyaaraddii African Express, taasoo ah in Ciidamada Itoobiya qeybta aan hoos tagin AMISOM”.
Warbixinta ayaa lagu muujiyay in sababta loo soo riday diyaaradda inay aheyd shaki laga qabay inay is qarxiso iyo xiriir la’aan, xitaa haddii aan la toogan laheyn, waxaa warbixinta lagu sheegay inay diyaaradda soo dhici laheyd maadaama lugaha diyaaradda aanu diyaar aheyn xilligii ay diyaaradda caga dhigan laheyd gegida.
Si kataba ha ahaatee waxaa ay AMISOM is fogeeyey in ay wax lug ah ku laheyn falkii lagu soo ridey diyaarada African Express airways, sidoo kale waxay si buuxda u cadeysey in diyaarada ay soo rideen Ciidamo itoobiyaan ah oo ka tirsaney AMISOM.
Halkan ka hoose akhriso warqadda
Previous articleMareykanka oo Doorashada Soomaaliya Ku taageeraya Lacag gaareysa 6 Milyan oo Dollar.
Next articleEmbryologists: A Muslim woman is the cleanest woman on earth.